Shina sy ny mpamatsy Ares80 fantsom-baravarankely Arc80 mora foana Kinzon
Vendrana Sliding Window Ares80
Ny fikandrana sliding-Ares80 dia malaza amin'ny fanatanterahana ny fepetra fivoahan'ny efitrano fatoriana. Satria varavarankely fanokafana mora, dia tsy manome fijery ankehitriny fotsiny ihany, fa manome fientanam-po bebe kokoa. Ireo varavarankely namboarina tamim-pahatokisana ireo dia misokatra kanefa tsy mampiasa sehatra anatiny na anatiny. Amin'ny alàlan'ny alàlan'ny fanakatonana ny varavarankely mikambana-Ares80 hikatona amin'ny safidy roa misokatra, azo alaina ihany koa ny lakilama fanalahidy mifantina.
Ny varavarankely tety aidina-Ares80
Fitaratra roa sosona
Kodiarana mitondra kodiarana
Vera avo roa insulate
Mafy ary maharitra ela
Roa na roa
Ny fikandrana sliding-Ares80 dia malaza amin'ny fanatanterahana ny fepetra fivoahan'ny efitrano fatoriana. Satria varavarankely fanokafana mora, dia tsy manome fijery ankehitriny fotsiny ihany, fa manome fientanam-po bebe kokoa. Ireo varavarankely namboarina tamim-pahatokisana ireo dia misokatra kanefa tsy mampiasa sehatra anatiny na anatiny. Amin'ny alàlan'ny alàlan'ny fanakatonana ny varavarankely mikambana-Ares80 hikatona amin'ny safidy roa misokatra, azo alaina ihany koa ny lakilama fanalahidy mifantina. Azon'ny olona mahazo ireto windows window-Ares80 ahafahan'ny jiro sy rivotra hiditra ao an-tranony ary mameno ihany koa ny interiors ao aminy.
Ao amin'ny toerana mihidy, ny varavarankely aluminiana Ares miaraka amina entona mavesatra dia manome fihenan'ny tabataba mihoatra ny 50 dB, izany hoe mahomby amin'ny fampiatoana ny tabataben'ny arabe.Ares amin'ny sliding aluminium dia mafana hatrany amin'ny ririnina ary miaro amin'ny hatsiaka.Research dia mampiseho fa miroborobo ny bavon'ny trano iray. Ny tranobe miaraka amin'ny fantsom-bolan'ny Ares mipetaka amin'ny alàlan'ny fikandrana alumina dia afaka mahatratra 15 isan-karazany amin'ny herin'ny angovo.
Ny varavarankely slzone fantsom-bolam-baravarankely Finzone dia voatsindrina ary efa nandalo ny fihoaran'ny rivotra, ny point point ary ny fitsapana fiantraikany. Ny mombamomba ny aluminium sy ny mekanika fanodinana sy fanokafana ny fikandrana aluminiana slziniina Finzone dia vita amin'ny fitaovana manaporofo toetrandro. Finzone sliding aluminium varavarankely dia manana garantiana vokatra 10 taona.Ny takelaka vita amin'ny aluminiana sliding of Finzone dia vita amin'ny vera fiarovana mafy. Ny fikandrana aluminiam-bolan'ny Finzone dia mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny CE voafetra / PSB any Singapore / Gost any Rosia.
Previous: Fantsom-baravarankely mifono vy Ales80-1
Manaraka: Mivadika eo amin'ny varavarankely aidina misy ny aluminium Ares83